Fampihenana ny vidiny Batman Arkham City | Avy amin'ny mac aho
Batman Arkham City GOTY, fihenan-danja amin'ny vidiny
Androany Izy io dia ao anatin'ny rindrambaiko sy lalao atolotry ny Apple Ary ity dia tsy lalao vaovao izay lazainay, tena izy, Batman: Arkham City dia tonga tao amin'ny Mac App Store tamin'ny Desambra 2012, fa raha marina fa miaraka amin'ity vidiny mahavariana ity dia tsy tokony hieritreritra momba azy io intsony.
Nandalo andiana fihenam-bidy ny lalao hatramin'ny nanombohany, fa androany tsy misy afa-tsy amin'ny 4,99 euro ary io no lalao (GOTY) Game of the Year Edition. Raha miandry ny hihazona ilay lalao ianao na tsy nanana an'io tao an-tsainao, miaraka amin'ity fihenam-bidy 75% ity dia tsy azonao hadino izany.
Izahay dia mieritreritra fa mandritra ny fotoana voafetra ny fihenam-bidy, Ka raha iray amin'ireo mankasitraka fotoana mahafinaritra hilalaovana amin'ny Mac ianao dia mety ho fotoana mety ity fakana ity lalao mahafinaritra ity amin'ny vidin'ny fihomehezana.
Ho fanampin'izay Batman: Arkham City Game of the Year Edition dia manampy ny atiny rehetra azo sintonina ao anatin'izany: Revenge of Harley Quinn, tantara iray mitokana izay nitranga roa herinandro taorian'ny zava-nitranga tamin'ny lalao lehibe, ho fanampin'ny Nightwing, Catwoman, Robin, Skins fonosana Arkham City sy Sarintany fanamby.
Ny takiana farafahakeliny izay takiana mba hilalao Batman: Arkham City Game of the Year Edition, dia:
Mpikirakira 2.0 GHz
Mac OS X 10.7.5 na avo kokoa
Sary 256MB farafahakeliny
16GB habaka kapila maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Batman Arkham City GOTY, fihenan-danja amin'ny vidiny
"Natomboka indray ny solosaina noho ny olana"
Hanara-maso anao tsy misy ny iPhone ny Apple Watch